Dhibeen EBOLA Itiyoopiaa hin seenne ta’us of Eeggataa jirra jedhu angawoonni - Welcome to bilisummaa
bilisummaa August 17, 2014	Leave a comment
Hanga ammaatti Itiyoopiyaa keessaa dhibee Ebolaan namni qabame hin jiru kan jedhan ministerichi eegumsa fayyaa qopheen duraa barbaachisu garuu raawwataa jira jedhan. Dr. Hussein Abdo Gadaa har’a ibsa kennaniin tarii yoo dhibeen kun akka tasaa mudate jechuu dhaan hospitaalli addaa qophaa’uu isaas dubbataniiru.
Dr. Hussein Abdo Gadaa har’a tuuta oduuf ibsa kennuun isaanii biyyootii dhiya Afriikaa keessatti dhibeen Ebola erga faca’ee as angawaa ol aanaa ibsa kennan isaan duraa ti. Ministeerichi ibsa isaanii kan jalqaban dhibeen kun hanga har’aatti Itiyoopiaa keessatti hin mul’anne jechuu dhaan ture.
Koreen kun jedhan Dr. Hussein Abdo sadarkaa biyyaatti Ebola ittisuuf qophee duraa godhamaa jiru gamaaggamaa jira.
Previous HUMNA BARREESSUU KEESSA JIRUUN GALAANA GUDDAA SOCHOOSUU DANDEENYA!!
Next GAREE UMMATA OROMOOTIIN SHORORKEESSAA JEDHAMUU QABU!